हाम्रै घरमा पाइने रहरकाे दाल र चनाको दाल खानुको यति धेरै फाइदाहरु थाहा पाउनुहोस । – Nepal Online Khabar
हाम्रै घरमा पाइने रहरकाे दाल र चनाको दाल खानुको यति धेरै फाइदाहरु थाहा पाउनुहोस ।
March 22, 2021 193
काठमाडौ : दालमा रहर उत्तम मानिन्छ । दिनहुँ उपयोग गरिने रहर दाल रातो र सेतो गरी दुई प्रकारको हुन्छ । रहर दालमा खनिज, कार्बो’हाइड्रेट, आ’इरन, क्या’ल्सियम आदि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ ।
यसमा २२ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । रहरको दाल बाथ, पित्त र कफ अर्थात् त्रिदो’षनाशक हुने भएकोले सबैका लागि अनुकूल मानिन्छ । आ’युर्वेदका अनुसार रहर रुखो, शीतल, हल्का, बाथ’कारक, कफ–पित्त र रगतको दो’षलाई समाप्त पार्ने हुन्छ । पच्न सजिलो र शौच रोक्ने गुणसमेत हुन्छ ।
यो वायु उत्पादक हुन्छ । यसले शारीरिक अंगलाई सुन्दर बनाउँछ । रहर रगत, कफ र र’गतसम्बन्धी वि’कार हटाउन उपयोगी मानिन्छ । रातो रहर हल्का, तीक्ष्ण र न्या’नो मानिन्छ । यसले भोकसमेत बढाउँछ । रहरले कफ, विष, रगतको ख’राबी, लुतो, कु’ष्ठ र पेटमा भएको की’रा हटाउँछ ।
यो दाल पा’चकसमेत हो । धेरै सजिलै पच्ने भएकोले यो दाल बिरामीलाई समेत दिइन्छ । पाइ’ल्स, ज्व’रोमा यो दालको उपयोग ला’भकारी मानिन्छ ।
अर्कातिर, चना शरीरमा तागत उत्पन्न गर्ने, भोजनमा रुचि पैदा गर्ने मानिन्छ । आयुर्वेदका अनुसार यो न्यानो प्रकृ’तिको हुन्छ । चनाले शरीरलाइ तरोताजा राख्ने गर्छ । रगतमा जोस उत्पन्न गर्छ । यो कले’जोका लागि समेत लाभदायक मानिन्छ । यसले रगत सफा गर्छ, धातु बढाउँछ र आवाज सफा पार्छ ।
रगतसम्बन्धी वि’कार हटाउन लाभदायक मानिन्छ । यसले पिसाब खोल्छ । चना मुख्यत: किशोर र शारीरिक मिहिनेत गर्नेहरूका लागि पौ’ष्टिक खाजा हो । चना भिजाएर वा अं’कुरित गरी नियमित बिहान सेवनले शरीर स्फू’र्तिवान् र शक्तिशाली हुन्छ । अंकु’रित चना खानुका धेरै फाइदा छन् ।
अंकु’रित चनाले धा’तुलाई पुष्ट, मांस’पेशीलाई सुदृढ र शरीरलाई बज्रजस्तै कठोर बनाउने प्राचीन मान्यता छ । यसको सेवन छालाको रोगमा समेत लाभदायक मानिन्छ । अंकु’रित चनाको सेवनले फोक्सो बलियो बनाउने मान्यतासमेत छ ।
कब्जि’यतको समस्या भएकाहरूको लागि अं’कुरित चना राम्रो मानिन्छ । भिटामिन ‘सी’ को मात्रा बढी हुने भएकाले चनाले तौल बढाउँछ । यसले रगत वृद्घि गर्नुका साथै सफासमेत गर्छ । रगतमा को’लेस्ट्रोलको मात्रा कम गरेर मुटुको रोग हटाउनसमेत चना सहयोगी मानिन्छ । बालबालिकालाई महँगो ब’दामको सट्टा कालो चना खुवाउनाले उनीहरू स्वस्थ हुन्छन् ।
Prevधरहराको २२ औं तलाबाट काठमाडौं नियाल्दा ! (फोटोहरु)
Nextकतारमा श्रमिकका लागि नयाँ न्यूनतम तलब लागू !
रमेश प्रसाईं र कल्पना दाहालले विवाह बारे पहिलोपटक मुख खोले… हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
भारतीय ना गरिकले प्रहरीलाई आ क्रमण गरेपछि यसरी सु रक्षामा उ त्रियो मधेसी समुदाय (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
मलेसियामा नेपाली सुरक्षा गार्ड कु’टिएको विषयमा दूतावासले थाल्यो अनुसन्धान…हेर्नुहोस।
प्रधानमन्त्री नै पार्टी फु टाउनतिर लागे दो श जति हामी लाइ – प्रचण्ड…हेर्नुहोस।
विद्यालय, सिनेमा हल र पार्टी प्यालेसहरु पनि ब’न्द गरिने ! (1639)